बिरुवाहरु गुलाब किन्न वर्तमान समयमा सजिलो छ। दसौं वा लगभग सबै गम्भीर बागवानी पसलहरूमा द्वारा प्रस्तावित विविधता पनि सयौं। तर, रोचक तथ्य जो यस्तो असाधारण, अचम्मको फूल मा गरिएका मानव हात को प्रयास छ, नितम्ब गुलाब जंगली सबैभन्दा साधारण सबै यो विविधता आउने छ।
हाइब्रिड टी गुलाब
तिनीहरूले सबै भन्दा लोकप्रिय र धेरै प्रजाति हौं। आफ्नो विशिष्ठ सुविधा फूल को एक परिष्कृत रूप हो। यी गुलाब सबै गर्मी र शरद ऋतु ब्लूम सक्नुहुन्छ (चिसो सम्म)।
हुर्किसकेका संकर चिया फूल बेड वा कन्टेनर मा प्रजातिहरू उठ्नुभयो। तिनीहरूले काटन लागि ठूलो हो।
। ब्रश पर्याप्त सीधा (विरलै - फैलाउने) पात छ 50 120 सेमी देखि एक उचाइ पुग्छ एक गाढा हरियो रंग, चमकदार वा मत्ती हुन सक्छ।
हाइब्रिड चिया गुलाब प्रजातिहरू कारण उच्चतम गुणस्तर को ठूलो फूल गर्न प्रसिद्धि र लोकप्रियता प्राप्त गरेका छन्।
यो एक चमत्कार हो! देखावटी सुगन्धित फूल भइरहेको धेरै, आकर्षक उच्च र शक्तिशाली पर्याप्त झाडी, एउटा वास्तविक सजावट भाग र बगैचा बन्न सक्छ। यी गुलाब लगाए एक्लै वा अन्य फूल बिरुवाहरु संग हुन सक्छ। रोजा आश्रम, जस्तै रोगहरु विषय हुनत powdery फफूंदी र कालो स्पट, अझै पनि एक राम्रो विविधता मानिन्छ। राम्ररी भोकमरी माटो मा ब्रश धेरै छिटो थप तीव्र र लामो समयसम्म बढ्दै छन्, र आफ्नो blooms।
रोजा आश्रम: विवरण
यो हाइब्रिड चिया गुलाब गर्न भन्छिन्। फूल तन्तु को सुरुमा र बुढ्यौली र burnout फूल सुन्तला हल्का बन्ने, धेरै उज्यालो coppery-खैरो-सुन्तला रंग छ। गुलाब फूल आश्रम ठूलो (व्यास 9.12 सेमी) र पूर्ण छ। यो तन्तु र अपूर्ण खुलासा बोट पत्रदल एक अर्को पर्याप्त पास। त्यहाँ पूरा dissolution हुँदा, तिनीहरूले जो गुलाब एक विशेष आकर्षण दिन्छ र बेल प्रजातिहरू यो एक बिट समान बनाउँछ, फिर्ता बाङ्गो गर्न सुरु गर्नुहोस्। फूलहरू inflorescence मा संकलित छन् (2-5 पीसी। स्टेम मा)। ब्रश ठाडो (50-120 सेमी को उचाई र चौडाई - 80 सेमी), ठूलो लम्बी चमकदार गाढा हरियो पात छ।
आश्रम मनैदेखि blooms उठेर उज्यालो, सुखद गन्ध छ। लामो समय को लागि झाडी राख्न blooming पछि फूल। काटन पछि राम्रो स्थितिमा।
रोपण एक घाम स्थिति गरेको छ, तर पनि penumbra गुलाब बनाउँछ। रोपण घनत्व 1 वर्ग प्रति 5.4 टुक्रा छ। एम।
यो बोट एक धेरै उच्च hardiness तथापि, छ गुलाब को सबै प्रजातिहरू रूपमा, हिउँदमा समय लुकाउने आवश्यक छ।
छुट्टी समयमा रंग संग के गर्न?
Campanula latifolia - नाजुक फूल
शरद ऋतु मा चेरी रूखहरू छाँट्ने - अनिवार्य र नियमित व्यायाम
उनको टाउको मा नोड लसीका: के भइरहेको छ?
सपना Decipher: के अङ्गुर सपना
Arshavin जूलिया - एक प्रसिद्ध फुटबल खेलाडी वा तीन छोराछोरीको केटी खुसी आमा द्वारा हालियो?
चेचक विरुद्ध खोप: वयस्क को कति कार्यहरू?
कसरी धूम्रपान करङहरु, मासु वा sausages संग मटर सूप खाना पकाउनु
"Zirtek" तयारी - औषधिको उपयोग र गुणहरूमा निर्देशन
Meadows को वातावरण। उपभोक्ताहरू र Meadow पारिस्थितिकी को घटक
Daria Zhukova: एक व्यापार स्त्रीको जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
को घन्टी Guessing
Monsieur क्यानिबल - उहाँले Ruggero Deodato द्वारा निर्देशित
विश्लेषणात्मक पृष्ठभूमि: ड्राफ्टिङका लागि ढाँचा र सिफारिसहरू